Faka i-emulator ye-Nintendo DS kwi-iPhone yakho ngaphandle kweJailbreak [NDS4iOS] | IPhone iindaba
Faka i-emulator yeNintendo DS kwi-iPhone yakho ngaphandle kweJailbreak [NDS4iOS]
Kudala kudala Emulators ze-iOS Aziveli eluntwini, unyaka nonyaka emva kokubhengezwa kokuqhekeka kwejele yenguqulo entsha ye-iOS, uninzi lwethu lulindele ii -apps ezinje nge-NDS4iOS okanye iPPSSPP ukuba ihlaziywe kwaye yenziwe iyahambelana ukuze sonwabele amandla esixhobo sethu kwaye izibonelelo zemo yolonwabo.
Kulo nyaka kubonakala ngathi Izinto ziye zanzima kwi-PPSSPP, Kwaye ngenxa yeengxaki zobuchwephesha ezinxulumene notshintsho lwangaphakathi kwi-iOS 9 kuya kufuneka silinde ngomonde kwaye sithandaze ukuba le-emulator isinde kule nguqulo intsha, nangona kunjalo I-NDS4iOS iyahambelana ne-iOS 9, kwaye ngoku ihambile inyathelo, ukubanakho ukuyifaka ngaphandle kokuqhekeka kwejele.
Ngamaxesha amaninzi kukho amaphepha azinikele ekuhlanguleni iiapps ezithunjiweyo kwiAppStore kunye bazise izatifikethi Ukuze ifakwe kwi-iOS ngaphandle kokuhamba kwi-A enkulu, ndithetha ngayo, umzekelo, iwebhusayithi ye-Emulators, ehlala iqinisekisa ukuvumela ukufakwa kwezi zicelo kwi-Safari ngokwayo kwaye ngaphandle kwesidingo se-jailbreak.
Ngeli xesha ngu-iOSEM osibuyisele umva we-Nintendo DS kunye ne-DSi emulator NDS4iOS, kwaye namhlanje siza kuchaza indlela yokuyifaka.
1 Isifundo sokufaka
2 Isifundo sokuTshintshela komdlalo
Ukusuka kwisixhobo sethu se-iOS sivula iSafari kwaye singene kule dilesi ilandelayo iosem.us/app/install/nds.html
Xa esi sikrini sibonakala, nqakraza ukufaka kwaye samkele isilumkiso esiya kuthi "iosem.us izama ukufaka" nds4ios ""
Buyela kwiscreen sasekhaya sesixhobo sakho kwaye ulinde usetyenziso ukufaka.
Ngaphambi kokuvula usetyenziso, yiya kuseto> Ngokubanzi> Iiprofayili kwaye uya kufumana iprofayile efakiweyo njengaleyo ikumfanekiso ongentla, cofa kuyo.
IOS iya kukubonisa ulwazi lweprofayile kubandakanya ukuba yeyiphi na i-app (nds4iOS), cofa kuThemba "igama leprofayile" kwaye wamkele umyalezo olandelayo.
Ngoku uya kuba ne-app efakiweyo kwaye iya kukuvumela ukuba uyiqhube, ihlala iquka ii-ROMS, umsebenzi owawusenziwa ngaphambili kwi-app ngokwayo kodwa uNintendo wakwazi ukuwususa lo msebenzi kwaye ngoku wenziwe kwi-PC okanye kwi-MAC. , sikubonisa ukuba ungayenza njani.
Isifundo sokuTshintshela komdlalo
Khangela kwi-Intanethi iROM ofuna ukuyikhuphela, asinakho ukubeka amakhonkco kuba iphula ilungelo lokushicilela, kodwa akufuneki ikuthathe ngaphezulu kokhangelo lukaGoogle.
Icebiso: Khangela i-rom ne (E) okanye iYurophu ngegama ukuze uqiniseke ukuba ikulwimi lwakho kwaye awukhupheli uguqulelo lwesiNgesi okanye lwaseJapan.
Ukuba iROM ekhutshelweyo icinezelwe qiniseka ukuba uyivule izip, ungasebenzisa iWinRAR kwiWindows okanye kwiKeka kwi-OS X, ifayile enesiphumo kufuneka ibe ngu ".nds".
Vula i-iTunes kwaye uqhagamshele isixhobo sakho se-iOS kwi-PC yakho okanye kwi-Mac.
Kwicandelo lezicelo elifakwe kwi-iPhone yakho, yiya ezantsi ukuze ubone abo baxhasa ukuhanjiswa kwefayile, khangela kwaye ucofe kwi-NDS4iOS.
Tsala ".nds" ifayile kuluhlu olungasekunene (lingenanto ukuba akukho ROM esele ilayishiwe) kwaye ujonge kwi-iPhone yakho ukuba ilayishwe ngokuchanekileyo kwi-NDS4iOS app.
Ukuba yonke into ihambe kakuhle, sele unayo, ngoku qala iROM oyifunayo kwaye uyonwabele imidlalo oyithandayo yeNintendo DS kwisixhobo sakho se-OS.
Qaphela: Kuphela zixhobo ezine-chip ye-A7 okanye ezingaphezulu ezinokuthi zikwazi ukuqhuba yonke imidlalo yeNintendo DS nge-60 fps (i-iPhone 5s okanye ngaphezulu), i-iPhone 5 okanye izixhobo ezine-chip ye-A6 eziza kuqhuba imidlalo eyamkelekileyo kwaye ezo zine-chip ye-A5 (i-iPhone 4s, iPod Touch 5G) kuxhomekeke kumdlalo oya kuba ngaphantsi kwe-20 fps.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Faka i-emulator yeNintendo DS kwi-iPhone yakho ngaphandle kweJailbreak [NDS4iOS]
xD okanye uphambene Ndifaka isatifikethi saseTshayina semvelaphi engaziwayo kwiselfowuni yam, masihambe, kwaye njengonjiniyela andikhuthazi mntu ukuba ayenze.
Enkosi ngengcebiso. Kodwa ungayidlala phi le midlalo iklasikhi?
Luis ngenxa kaThixo uthenge iDS oyifumana kwindawo yesibini ikwimeko entle kakhulu
Uxolo uyifumene 🙂
UMarcos Suarez sitsho
Andifumani phepha linamagumbi asebenzayo 🙁
Andinakukunika nantoni na, ndiyaxolisa, nangona kunjalo ungaGoogle «roms nds» kwaye uyakuyifumana, kulula 😀
Oku kuvakala ngathi kukunika inkululeko simahla ukuba iselfowuni ihlaselwe ziintsholongwane.
Andinalwazi kakhulu ngomngcipheko owuthathayo ngokufaka esi siqinisekiso. Ngaba umntu othile unokundicacisela kancinci ukuba athathe isigqibo sokufaka okanye hayi?
Le mpendulo isebenza kuni nobabini baseAlexandros ngasentla:
Ukufaka iprofayile yemvelaphi engaziwayo kwi-iOS kubeka umngcipheko kwezokhuseleko, ngakumbi kuxhomekeke kuhlobo lweprofayile, ezi profayile zinokubandakanya iipassword zenethiwekhi ze-Wi-Fi, iisetingi zeVPN, iziqinisekiso, imigaqo-nkqubo yezokhuseleko kunye nezinye izinto.
Ngohlobo oluthile lweprofayili, unokwazi ukude usetyenziso olufakelwe kwisixhobo kunye nolunye ulwazi malunga nayo, njengepesenti yebhetri kunye nabanye, unokumisela kude imigaqo-nkqubo yokhuseleko (ulawulo lwegama eligqithisiweyo ukufikelela kwisixhobo, nangona kunjalo oku akunakuguqulwa, kufuna kuphela ukuba umsebenzisi ayitshintshe ukusuka kwisixhobo ngalo lonke ixesha le-X okanye ukuntsokotha endaweni ye-PIN), kwaye ufake i-WebClips, ezinye iiapps kwi-Sprignboard ezimfutshane kwiwebhu.
Ezi zezimbalwa zokusetyenziswa kunye neentlobo zeeprofayili ezikhoyo, ngoku, masiqhubele phambili kwiprofayile efakela le webhusayithi kumbuzo:
Iprofayile efakwe ngu-iOSEM.US sisatifikethi seshishini, le nkangeleko isetyenziselwa ukugunyazisa ukuvulwa kwezicelo ezingaphandle kweAppStore (NDS4iOS kule meko), umsebenzisi angayithemba iprofayile kwaye iiapps ezifakwe nesi satifikethi zinokwenziwa. ngaphandle kokungena kwivenkile ye-Apple, oku kuthetha ukuba singavula i-emulator ngaphandle kokuvunywa yi-Apple kunye nazo zonke ezinye iiapps ezifakwe ngesiqinisekiso esifanayo, akukho nto iyenye, oku akuvuli mnyango wokufaka ezinye iiapps ngaphandle kwemvume yakho , kuthetha ukuba zonke iiapps ezifakwe nesi satifikethi (sivumele ukufakelwa kwazo ngokwamkela kwiSafari isilumkiso esicela ukufaka usetyenziso) zinokuqhutywa kwisixhobo sakho, kwiiSetingi> Ngokubanzi> Iiprofayili> IPROFILE YOBUCHULE baya kuthi ukwazi ukuba zeziphi ii -apps ezifakwe kusetyenziswa le profayile kwaye urhoxise ukuthembela okunikiweyo kunye nokucima zonke iiapps ezinayo.
Sisiphi isigqibo esifikelela kuso?
1. Kuyingozi ukufaka iiprofayili kwimithombo engaziwayo njengoko oko kuthetha ukuba nayiphi na usetyenziso efakwe kule profayili inokuvulwa ngumsebenzisi, nokuba inee-malware.
2. I-Emulators ziapps ezingasekelwa yiApple kwiAppStore kwaye yiyo loo nto kufuneka zisebenzise ezi webhusayithi kunye nezi zatifikethi ukuze zifakwe kwaye zisetyenziswe njengakuqala ngobuqili bokutshintsha umhla.
3. Le nkangeleko ethile ayifanele ibangele nayiphi na ingozi, nam ndiyifakile kwaye ndiyazithemba kwaye ndisebenzisa i-NDS4iOS ngaphandle kwengxaki kwaye ngaphandle kwesixhobo sam esinokuziphatha okungaqhelekanga (ungasoloko uthintela ukusetyenziswa kwedatha kule app ngokomzekelo), ukuba awuyithembi, ilula ngokungafaki nayiphi na usetyenziso kwi-Safari.
4. Kuhlala kunokwenzeka ukucima iiprofayili kunye neeapps ezinxulumene nazo ukubuyisela ukhuseleko ebesinalo ngaphambili.
Ndiyathemba ukuba ndisombulule ukungathandabuzeki kwakho, nokuba ayiyiyo i-Actualidad iPhone kwaye andinaxanduva lokusetyenziswa okunokunikwa kule profayile, ndathi ndiyifakile kwaye ndiyayithemba kwisixhobo sam ngaphandle kokuphazamiseka.
UMario mendoza sitsho
Bro andizifumani ii -apps kwi-iTunes, kuphela i-Netflix enye, ndingenza ntoni?
Phendula uMario Mendoza
Leyo ifakelwe iintsuku ezi-2 ayisayi kuvulwa ayisebenzi
UMario, uSalpa noBoja, awungowokuqala ukundixelela into enje, kwisixhobo sam esine-iOS 9.1 iyaqhubeka nokusebenza kwaye i-iTunes yamkela ii -apps, kubonakala ngathi ayinguwe wedwa onale ngxaki, ndincoma ukuba uhlala ugcina imidlalo yakho onokuyenza kwi-PC okanye kwilifu kwaye xa ungafumani ndlela yokwenza okanye ukusombulula ingxaki, khipha iprofayile kunye nohlelo lokusebenza (kuba ezi azizuku ndikuncede kule meko), ndingakunika isisombululo kodwa yi-iOSEM.US onokuphanda lo mbandela ...
Kwenzeka kum ngokufanayo. Ndenza ngokugqibeleleyo kwaye ngoku akandivumeli ndingene ...
Sawubona uJuan, okwenzekayo kum kunye ne-emulator kukuba ndiyifake kakuhle iintsuku ezimbini, yonke into ilungile
Kodwa emva koko kusele i icon kuphela
Andiqondi ukuba kwenzeka ntoni
Ndizamile ukuyicima kwaye ndiyifaka kwakhona kwaye:
«Ayikwazi ukukhuphela usetyenziso. Okwangoku awukwazi ukufaka i-nds4ios »
Kubonakala ngathi iApple iyivalile ... O_o
Ndine-iOS 9.2 kwaye ayifaki nayiphi na i-emulator, okanye iinguqulelo ezindala, ngaba iya kuba yinkqubo entsha yokusebenza ye-iPhone yam?
Ndisandula ukuphucula i-IOS 9.3 kwaye ayindiniki ukhetho lweeprofayili.
Ayindivumeli ukuba ndikhuphele
Zezdanov (@zvezdanov) sitsho
Ayigqibi ukukhuphela kum, ihlala ikhulula ngaphambi kokugqiba kwaye iphose umyalezo othi "ukhuphelo alunakugqitywa ngoku", oku kuyandothusa kuba nge-emulator ye-GBA bendingenangxaki ukuyifaka nokuyiqhuba. Mhlawumbi ngamashwa amabi nje.
Phendula ku-Zvezdanov (@Zvezdanov)
Ndingayisebenzisa njani kwi-iPad, ifayile ithi .nds kwaye ndiyayivumelanisa neDropbox kodwa igumbi aliveli kwisicelo
Ungayicima njani kwaye ungayicimi iakhawunti yakho kaWhatsApp
Yenza i-Springtomize 3 malunga nokufika eCydia ihlaziyiwe kwi-iOS 9